Ku Darso Warbaahinta Goobtaada Si Fudud Wimpy Player | Martech Zone
Ku Darso Warbaahinta Goobtaada Si Fudud Wimpy Player
Axad, Agoosto 5, 2007 Axad, Agoosto 5, 2007 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waxaan raadinayay Flash Flash player oo fiican si wiilkeeygu ugu daro music si uu blog si fudud. Ciyaartoyda Flashku way fiican yihiin in la hirgaliyo maxaa yeelay waxay sii deyn karaan muusikada halkii ay ka dhigi lahaayeen in isticmaalaha uu hal mar wada dejiyo Ka dib markii aan baaray oo aan baaray, waxaan ugu dambeyntii ka dhacay guud ahaan Ciyaaryahan Wimpy.
Toddobaadkan dhammaadkiisa, wareysi aan u qaaday NPR oo ku saabsan adeegsiga ilaha internetka hagaajinta magdhowgaaga ayaa lagu dhajiyay internetka. Meeshu way fiicneyd oo waxaan doonayay inaan ku dhajiyo aaladda webka ee aan dhisay, Xisaabiyaha Lacagta.
Wimpy waxay leedahay dhowr ciyaartoy, badhan fudud, qalab maqal ah, iyo fiidiyoow fiidiyoow ah. Waxaa laga yaabaa in muuqaalka ugu wanaagsan ee dhammaan seddexda ay yihiin inay yihiin kuwo la awoodi karo oo si buuxda loo qaabeyn karo. Aniga loogu talagalay ciyaaryahanka goobta wiilkayga qiyaastii 30 daqiiqo.
Waxaan qorsheeyay a Ciyaaryahan u ciyaara Jones Soda in ay ku soo bandhigeen degelkooda sanadkii hore. Shalay, waxaan u qaabeeyay badhanka ciyaar yahanka fudud Xisaabiyaha Lacagta ilaa toban daqiiqo.
Maqalku waa aalad aad u fiican oo loogu talagalay boggaga internetka. Ma aaminsani inay tahay in si xad dhaaf ah loo isticmaalo ama si toos ah loo bilaabo (Waan necbahay inaan la yaabanahay maqalka khadka tooska ah!), Laakiin runtii wax badan ayey ku dari kartaa websaydhka - bixinta shakhsiyadeed sida sawir ama muuqaalba u sameeyo. Macluumaadka ama aaladda shabakadda, cajalad maqal ah ayaa xoogaa ku siin karta goobta sidoo kale.
Martech Zone: Kaalinta # 1 ee Technorati
Waa Waxyaabaha Yaryar ee Wanaajiya Khibradda Isticmaalaha!